Na manahy olona, na ahiahin’ny olona… | NewsMada
Na manahy olona, na ahiahin’ny olona…
Par Taratra sur 29/02/2016
Mifarana indray ny volana. Mby aiza? Na ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka… Tsy hita be ihany. Akondro mahia misy masaka, saro-dazaina amin-kavana. Na boka mihalo-poza izay mihetsika amin’izao, manosika azy hiverina.
Tena mitondra fahamarinan-toerana politika ve ny fijoroan’ny Antenimierandoholona? Tsy hita fiafara ny fifanarahana andraikitra eo amin’ny Antenimierampirenena sy ny filohan’ny Repoblika. Mbola amin’izany ihany ve ny raharaha amin’izao?
Efa misy ny miomana amin’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena, taona 2018. Tsy ilaozan’izay fifampiandrasana kendry tohina… Miady ny lehibe, ka voatorotoro ny ankizy? Nifanenjehana sy nifanenjanana izay miseho sy atao rehetra.
Inona marina ny olana? Fitavozavozana, tsy politika sy fandaharanasa mazava, tsy fijerena lavitra na ny hafa… Anisan’ny lehibe amin’izany tsy fisian’ny vola? Na ny tsy fahazoana trosa sy fanampiana amin’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny…
Eo ireo fepetra amin’izany: fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, fangaraharana, ady amin’ny kolikoly, fanajana zon’olombelona, tsy fisian’ny tsimatimanota, fandaminana ny tontolon’ny fandraharahana, fampanjakana ny fandriampahalemana,…
Mby aiza izany rehetra izany? Misy ny tomponandraikitra azo tahafina: tapa-kevitra, sahy, vonona, mitarika, miroso, mahavita… Mba tena tsy ananan-kavana tokoa ny raharaham-pirenena, andehanana amin’ny fahamarinana sy fahitsiana.
Hatramin’izao, mbola mifampiandriandry na mpifampiahiahy lava na samy mpitondra aza?
Sanatria, izay no mahatonga ny resabe hoe fanamboarana na fanovana ny governemanta ho tsy hita be ihany. Tsy velon-kantenaina, tsy maty afoy…
Raha izany tokoa ny fifandraisana na eo amin’ny samy mpitondra aza, vao mainka ny vahoaka sy ny mpitondra… Aiza na hatraiza ny fifampitokisana? Mandeha eo aloha ny tena, ahiahin’ny olona; mankao aoriana, manahy olona…
Mandeha ny fotoana, sao ilaozan’ny fahatokisana mihahaka?
Asief: Mbola lany ho filoha i Johne Love 21/01/2022